Nyowani beta 3 shanduro dzewatchOS 7 uye tvOS 14 | Ndinobva mac
Nyowani beta 3 shanduro dzewatchOS 7 uye tvOS 14
Mukuwedzera kune izvo zvitsva mu macOS 11 Big Sur yekuvandudza beta, iyo Cupertino kambani yakaburitsa iyo Mushambadzi beta 3 shanduro dzeIOS 14, watchOS 7, uye tvOS 14. Idzi shanduro nyowani dzinowedzerawo aesthetic shanduko inotaurwa mune beta vhezheni ye macOS Big Sur, semuenzaniso iyo yebhatiri icon.
Apple inoenderera mberi kuyedza uye kugadzirisa ese beta beta kuitira kuti vashande nemazvo uye pamusoro pezvose kuti akatsiga uye akachengeteka kune iyo michina. Mupfungwa iyi, inofanirwa kutorwa mupfungwa kuti aya beta 3 shanduro dzevagadziri uye zvinokwanisika kuti vhezheni dzeruzhinji dzichasvika mumaawa mashoma anotevera.
Nhau dziri mune idzi betas dzinowanzo tarisa kudzikama uye chengetedzo yesystem, asi pamwe nehuwandu hweshanduko idzo muzvibvumirano mukugadzirwa kweIOS neMacOS, tinogona kutaura kuti idzi shanduro dzinowedzera zvakakosha dhizaini dhizaini zvakare. Muchiitiko chewatchOS 7 uye tvOS 14, shanduko dzinotarisa kugadzikana uye chengetedzo mukuwedzera kune izvo zvigadziriso mune mamwe ma icon uye muwatchOS vanovandudza maturusi anowanikwa mune yekutanga beta senge Kurara Kutsvaga kana iyo yekuwacha maoko.
MuTVOS 14 takasangana neruzivo rweMufananidzo muMufananidzo, iro basa rinotibvumidza isu kuona mafirimu kana maTV muwindo diki mukona yeiyo skrini tichiita chimwe chinhu paApple TV kana iyo Nyowani app yeApple TV muVOS 14 inotibvumira kudzora zvishandiso zvakabatana HomeKit yakanangana neTV, ndidzo dzimwe dzenyaya dzakatanhamara.
Chokwadi ndechekuti panguva ino mavhezheni matsva emaApple OS akasiyana anoratidza shanduko dzakakura munzira dzese, tinogona kuvada zvakanyanya kana zvishoma, asi zvirinani kuti vatangisa shanduro dzine zvakawanda zvitsva maficha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Nyowani beta 3 shanduro dzewatchOS 7 uye tvOS 14
Bangkok ichava neayo yechipiri yeApple Chitoro neMugovera
MacOS Big Sur beta 3 yakaburitswa